၈။ Archives Title Post လုပ်နည်း ~ မောင်သက်ဝေ
၈။ Archives Title Post လုပ်နည်း
2. Layout ကို click ပြီ Edit HTML ကို click လိုက်ပါ။
3. အောက်က code တွေကို ရှာလိုက်ပါ။
4.တွေ့ ပြီဆိုရင် အထက်ပါ code ကို Delete ပေးပြီ အောက်က Code တွေနဲ့ အစားထိုးလိုက်ပါ။
<<!--ARCHIVE-TITLES-STARTS--><br /> <b:if cond='data:blog.homepageUrl != data:blog.url'><br /> <b:if cond='data:blog.pageType != "item"'><br /> <a expr:href='data:post.url'><br /> <li></li><data:post.title/></a><br/><br/><br /> <b:else/><br /> <b:include data='post' name='post'/><br /> </b:if><br /> <b:else/><br /> <b:include data='post' name='post'/><br /> </b:if><br /> <!--ARCHIVE-TITLES-STOPS--><br />
5.အထပ်ပါအတိုင်း လုပ်ပြီသားနဲ့ အောက်ပါအတိုင်း Order Post ကိုနိုပ်လိုက်တာနဲ့ အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။